အသေးစိတ်နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ခြင်း: Samsung Galaxy S8 နှင့် Galaxy S7 | Androidsis
Galaxy S7 နှင့် Galaxy S8
ယခုတပတ်တွင် Samsung သည်စင်မြင့်သို့တက်လှမ်းခဲ့သည် သူတို့ရဲ့အသစ်ကစွမ်းဆောင်ရည်ကိုတင်ပြ, Galaxy S8 နှင့် Galaxy S8 Plus၊ အံ့မခန်းဖွယ်ဖန်သားပြင်ပါသောစမတ်ဖုန်းနှစ်ခု နှင့်အချို့အလွန်အေးမြ features တွေ။ Galaxy Note7၏အရှိန်အဟုန်အပြီးတွင်ကုမ္ပဏီ၏ဆိပ်ကမ်းအသစ်များသည်အမှတ်အသားကိုထိမှန်သွားပုံရသည် သူတို့မှာစံချိန်တင်ရောင်းအားကိုရောက်ဖို့သူတို့မှာအရာရာတိုင်းရှိတယ် စိတ်ပျက်စရာမရှိဘဲ ဝယ်သူမရှိ သို့သော်ဤမိုဘိုင်းဖုန်းမျိုးဆက်သစ်နှင့်မျိုးဆက်ဟောင်းအကြားဤမျှကြီးမားသောကွာခြားမှုရှိပါသလား။ ရှာကြစို့။
အထူးသ, ဒီဆောင်းပါး၌သင်တို့ကိုငါဆောင်ခဲ့ရမည် Samsung Galaxy S8 နှင့် Galaxy S7 တို့အကြားအသေးစိတ်နှိုင်းယှဉ်ချက် ဆိပ်ကမ်းနှစ်ခုအကြားအဓိကကွဲပြားခြားနားမှုများနှင့်တူညီမှုများကိုသင်အတိအကျသိရှိနိုင်ရန်ဖြစ်သည်။
1 Samsung Galaxy S8 နှင့် Galaxy S7 နှိုင်းယှဉ်ချက်များ၊
2 Samsung Galaxy S8 နှင့် Galaxy S7 - Design
3 Samsung Galaxy S8 နှင့် Galaxy S7 - Hardware
Samsung Galaxy S8 နှင့် Galaxy S7 နှိုင်းယှဉ်ချက်များ၊
အမှတ် Samsung ကမိုဘိုင်း Samsung ကမိုဘိုင်း
operating system ကို Samsung Experience 7.0 စိတ်ကြိုက်အလွှာဖြင့် Android 8.1 Nougat Grace UX စိတ်ကြိုက်အလွှာဖြင့် Android 7.0 Nougat
ဖန်သားပြင် ၅.၈ လက်မစူပါ AMOLED Quad HD + ၅.၅ လက်မစူပါ AMOLED Quad HD
resolution ကို 2960 x 1440 (တစ်လက်မလျှင် ၅၇၀ ပစ်ဇယ်) 2560 x 1440 (577 dpi)
ကာကွယ်မှု Gorilla Glass ကို5Gorilla Glass ကို 4
ရှုထောင့်အချိုး 18.5:916: 9
နောက်ကင်မရာ 12 megapixels |f/ 1.7 | OIS | Dual-Pixel 12 megapixels |f/ 1.7 | OIS | Dual-Pixel
ရှေ့ကင်မရာ 8 megapixels |f/ 1.7 | Autofocus5megapixels |f/ 1.7
Processor ကို Snapdragon 835 (10nm) သို့မဟုတ် Exynos 8995 (10nm) Snapdragon 820 (14nm) သို့မဟုတ် Exynos 8990 (14nm)
ဂရပ်ဖစ် Adreno 540 Adreno 530
ရမ်4GB ကို4GB ကို
သိုလှောင်မှု 64 GB ကို 32 GB ကို
ဘက်ထရီ 3000mAh 3000mAh
ခုခံလက်မှတ် IP68 (ရေနှင့်ဖုန်မှုန့်) IP68 (ရေနှင့်ဖုန်မှုန့်)
လက်ဗွေအာရုံခံကိရိယာ ဟုတ်ကဲ့ ဟုတ်ကဲ့
နားကြပ်ပေါက် ဟုတ်ကဲ့ ဟုတ်ကဲ့
USB မှတ်-C မှာ ဟုတ်ကဲ့ မရှိပါ (micro USB 2.0)
Iris စကင်နာ ဟုတ်ကဲ့ အဘယ်သူမျှမ
ကြိုးမဲ့အားသွင်း ဟုတ်ကဲ့ ဟုတ်ကဲ့
microSD slot က ဟုတ်ကဲ့ (256GB အထိ) ဟုတ်ကဲ့ (256GB အထိ)
ကွန်ယက် LTE Cat ။9LTE Cat ။ 16
ဝိုင်ဖိုင် dual-band ကို ac WiFi dual-band ကို ac WiFi
ဘလူးတုသ် 5.0 ၂ LE
GPS စနစ် GPS | A-GPS | BeiDou | Glonass | ဂယ်လီလီယို ဂျီပီအက်စ် | A-GPS | GLONASS | BeiDou
သည်အခြား features တွေ Google Assistant Bixby AI -
ရှုထောင့် 148.9 x ကို 68.1 x ကို 8.0mm 142.4 x ကို 69.6 x ကို 7.9mm
အလေးချိန် 155g 152g
စြေး 809 ယူရို ခန့်မှန်းခြေ ယူရို ၅၃၀
Samsung Galaxy S8 နှင့် Galaxy S7 - Design
Samsung Galaxy S8 နှင့် Galaxy S7 အကြားအကြီးမားဆုံးကွာခြားချက်မှာသူတို့၏ဒီဇိုင်းဖြစ်သည်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မော်ဒယ်အသစ်ဟာအထင်ကြီးစရာကောင်းတယ် ၅.၈ လက်မအရွယ် Super AMOLED ကွေးကောက်မျက်နှာပြင်နှင့် Quad HD + resolution တို့ပါဝင်သည်Samsung က Infinity Display ဟုအမည်ပေးခဲ့သည်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်, ကွေးအနားရှိခြင်းမှလွဲ။ , S8 မျက်နှာပြင်သည်အာကာသကိုပိုမိုကောင်းမွန်စွာအသုံးပြုသည် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမူလစာမျက်နှာခလုတ်ကိုချို့တဲ့ (ခလုတ်ကိုဖန်သားပြင်အောက်၌ဖုံးကွယ်ထားသည်)၊ အထက်ပိုင်းတွင် Samsung လိုဂိုကိုမပြတော့ပါ။
နှိုင်းယှဉ် Galaxy S7 တွင် ၅.၁ လက်မ Super AMOLED Quad HD ပြားမျက်နှာပြင်တပ်ဆင်ထားသည်နှင့်စားပွဲတွင်တွေ့ရသည့်အတိုင်း၎င်းသည် S8 နှင့်အထူနီးပါးတူညီသော်လည်း Galaxy SXNUMX ထက်အနည်းငယ်တိုသည်။
မျက်နှာပြင်ကာကွယ်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ Galaxy S8 သည်အနည်းငယ်သောခံနိုင်ရည်ရှိသည့်မျက်နှာပြင်တစ်ခုကြောင့်ဖြစ်သည် Gorilla Glass5ဖန်ခွက်S7 မှာဆိုရင် Gorilla Glass4ကိုတွေ့ရပြီ။ ထူးခြားမှုကြီးကြီးမားမားမရှိသင့်ဘူး။ S8 မှာပိုကောင်းတဲ့အကာအကွယ်မျက်နှာပြင်ရှိမယ်လို့ထင်ပေမယ့်နှစ်ခုစလုံးကအနည်းငယ်ကျဆင်းခြင်း၊
Samsung Galaxy S8 နှင့် Galaxy S7 - Hardware
ဟာ့ဒ်ဝဲအရ Galaxy S8 တွင် 835GHz octa-core Snapdragon 2.3 ပရိုဆက်ဆာပါဝင်သည် (သို့မဟုတ်တစ် ဦး နှင့်အတူ) Exynos 8895 စဉ်အလားတူသတ်မှတ်ချက်များ၏) Galaxy S7 မှာ Snapdragon 820 ကိုတွေ့တယ် သို့မဟုတ် Exynos 8990စျေးကွက်ပေါ်မူတည်။ လွန်ခဲ့သောလအနည်းငယ်ကကျွန်ုပ်တို့တွေ့ခဲ့ရသည့်အတိုင်း S8 ပရိုဆက်ဆာအသစ်များသည်စွမ်းဆောင်ရည်တိုးတက်မှုနှင့်အတူရောက်လာပြီးစွမ်းအင်သုံးစွဲမှုနည်းစေရန်နှင့်ထုတ်ကုန်များ၏ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ကိုတိုးချဲ့ရန်အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
ဒါပေမယ့်စဉ်းစားကြည့်ပါ S8 နှင့် S7 နှစ်ခုစလုံးတွင်တူညီသော 3000mAh ဘက်ထရီကိုအသုံးပြုထားသည်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရသည့်အခါ Galaxy S8 သည်အားနည်းချက်တစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ပိုမိုထိရောက်သည့်ပရိုဆက်ဆာရှိသော်လည်း S8 ၏မျက်နှာပြင်သည်ယခင်မော်ဒယ်များထက်ဘက်ထရီကိုပိုမိုအသုံးပြုသည်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်, ကသတိပြုသင့်ပါတယ် ယခု Galaxy S8 သည်ပုံမှန်အားဖြင့် 64GB သိုလှောင်နိုင်သည့်စက်ရုံမှလာသည်Galaxy S7 ၏အခြေခံ model သည် 32GB ပါရှိသည်။ သို့သော်ထိုပစ္စည်းနှစ်ခုလုံးတွင် 4GB RAM ရှိပြီး microSD ကဒ်ပြားကို 256GB အထိတိုးချဲ့နိုင်သည်။
အခြားသတ်မှတ်ချက်များအနက် ဆိပ်ကမ်းနှစ်ခုလုံးတွင်နောက်ကင်မရာ 12 megapixel ရှိသည် optical image တည်ငြိမ်မှု၊ Dual-Pixel focus system နှင့်အတူတူပင်f/ 1.7 aperture နှင့် S8 ၏ရှေ့ကင်မရာကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်စေခဲ့သည်။ 8 megapixel အာရုံခံစနစ်နှင့် iris စကင်နာနှင့်အတူပါရှိသည်S7 တွင်5megapixel သာရှိသည်။
ဆက်သွယ်မှုကဏ္theတွင်အထင်ရှားဆုံးအရာသည်တည်ရှိခြင်းဖြစ်သည် Galaxy S5.0 ပေါ်ရှိ Bluetooth 8 module, လွှမ်းခြုံ quadruples တဲ့စံနှင့် Bluetooth 4.2 မြန်နှုန်းကိုနှစ်ဆတိုးစေသည်, Galaxy S7 ၌တည်ရှိသည်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ Bluetooth 5.0 နဲ့အသံအရည်အသွေးကပိုကောင်းမှာမဟုတ်ဘူး။ ဆိုလိုတာက Galaxy S8 နဲ့ကြိုးမဲ့ချိတ်ဆက်မယ်ဆိုရင်နားကြပ်က Galaxy S7 နဲ့ချိတ်မယ်ဆိုရင်တော့နားကြမှာမဟုတ်ဘူး။
ဆက်သွယ်မှုနှင့် ပတ်သတ်၍ လည်းကျွန်ုပ်တို့တည်ရှိမှုကိုညွှန်ပြရမည် S8 ပေါ်ရှိ USB Type C port တစ်ခုS7 မှာ microUSB 2.0 port ကိုပဲတွေ့တယ်။ ကောင်းသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည် ဖုန်းနှစ်ခုလုံးသည်ကြိုးမဲ့အားသွင်းခြင်းနှင့်မြန်သောအားသွင်းခြင်းအတွက်အထောက်အပံ့ရှိသည်.
နောက်ဆုံးအနေဖြင့်၊ Bixby ၏လက်ထောက် Galaxy S8ကိရိယာနှင့် တွဲဖက်၍ terminal ကိုသုံးနိုင်သည် Samsung က DeX အဲဒါကို desktop ကွန်ပျူတာတစ်လုံးအဖြစ်ပြောင်းဖို့ပါ။ ထိုနည်းတူစွာပင် S8 တွင်ဖုန်း၏ကျောဘက်တွင် fingerprint sensor ရှိပြီး Galaxy S7 တွင် Home Home တွင်တပ်ဆင်ထားသည်။
ဤရွေ့ကားရှိကြ၏ Samsung Galaxy S8 နှင့် Galaxy S7 အကြားအဓိကနှင့်အကြီးမားဆုံးကွာခြားချက်များ။ ယခုအချိန်တွင်သင်သည်လုပ်နိုင်သည် Galaxy S8 ကိုကြိုတင်ဝယ်ယူပါ ဈေးနှုန်းမှာ ၈၀၉ ယူရိုဖြစ်ပြီး Galaxy S809 သည်မကြာသေးမီရက်သတ္တပတ်များအတွင်းအထူးလျှော့စျေးများခံစားခဲ့ရပြီးယခုခန့်မှန်းခြေစျေးနှုန်းဖြင့်ဝယ်ယူနိုင်ပြီ 469 ယူရို.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » Samsung » Samsung Galaxy S8 နှင့် Galaxy S7 နှိုင်းယှဉ်ချက်အသေးစိတ်
အဘယ်ကြောင့်ကျွန်ုပ်၏ Galaxy S7 Edge ကို Galaxy S8 အသစ်သို့လဲလှယ်တော့မည်မဟုတ်ပါ